Qaabka ugu sahlan ee aad lacag u shaqaysan kartid Xalaal ah oo Onlin ah
Thursday 8th February 2018 21:28:39 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargeysa
Si aad u awooddo inaad gurigaaga ama halka aad rabto ee kale adigoo jooga aad lacag shaqaysato, ugu horrayn waa inaad haysataa aalad kuu
saamixi karta inaad waddadan marto, sida Computer ama Mobile nooca android-ka ah (telku wuxuu ahaan karaa nooca aad u taqaanno screen touch).
Shaqadaadan ma aha mid xaddidan, sidoo kale lacagta aad shaqaysan kartidna ma aha mid xaddidan, waxa ay ku xidhanyihiin hadba inta aad waqti siisid qabashada hawshan.
Ugu horrayn ku dhufo link-ganhttps://goo.gl/BN98Kh
Kaddib dhanka bidix halka sare ee loogu talo galay in qofka userka leh uu ka galo, waxaa ku hoos yaallaregiser.
Ku dhuforegister, oo kaddibna buuxbuuxi foomka kuu soo baxaya, isla marka aad foomkaas hawshiisa dhammayso, waxaa kuu soo baxaya inaad samaysatay, kaddib ku dhufoSTARTWATCHING PAYED ADSoo isla markaaba kuu soo baxaysa, waana halka aad tallaabada koobaad ee shaqada aad ka bilaabaysid.
Waxaad arki doontaa khaanad ay ku kor qoranyihiinafar numbertusaale ahaan4856, fadlan geli khaanadda bannaan afarta tiro ee lagu siiyay, isla markaana eeg dhinaca bidix ee ay kuugu qorantahayEARNED(lacagta aad shaqaynaysid).
Khaanaddan afarta tiro la gelinayo, ma dhammaanayaan waana halka aad ka shaqayn doontid, waxaa hoosteeda ku yaalla alaab iib ah oo kala duwan oo hadba marka aadafar tirokhaanadda gelisaba, kuwo kale ayaa isa soo dhigaya oo kuwii hore beddelaya, si lamid ah sida ay lacagtu kuugu kordhayso.
Ogow mar kale shaqadu ma aha mid xaddidan, waxana aad awooddaa inaad maalin gudaheed ku samaysato xaddi lacageed oo badan, waxay ku xidhantahay hadba inta aad adigu waqti ku bixiso.
Fadlan ogow in uu sidoo kale jiro wax la yidhaahdo Referrals (dadka ku tixraacay) kuwas oo laguu siiyay link- aad u diri kartid, isla markaana hadba lacagta ay shaqaystaan 50% ayaad shirkadda IQ MONEY ay ku siinaysaa, mana aha lacag laga jaray referrals-kaaga.
Waana shuruud in qofkasta uu keeno dad referrals, marka ugu horraysa ee aad lacagta koobaad la baxaysidna, waxa shuruud ah in ay jiraan illaa 40 referrals. Mararka xiga waxba laguma waydiin doono.
SIDEE LOO HELI KARAA REFERRALS?
Si aad u hesho referrals waa in marka hore aad la wadaagtaa dadka aad rabto inay fursaddan ka faa'idaystaan links-ka lagu siiyay, kaasoo aad ka heli kartid marka aad ku dhufato Menu bar-ka sare halka ay ku qorantahayUSER AREA,markaas kaddibna waxaad arki doontaa Link-ga aad dadka kugu xidhiidhsami doona aad siin doontid.
Dabcan waxaad ka dhex iibsan kartaa isla mareegta aad lacagta ka shaqaysanaysid ee IQ Money, waxana aad arki doontaa marka la gaadho halka lacagta laga dirayo oo aan xagga hoose kuugu sheegi doono.
Talo, waxaan kugula talin lahaa in dadka referrals-ka aad ka dhigayso ay noqdaan Soomaali, oo fadlan ha ka gadan dadka kale ee qalaad adigoo dadyow Soomaali ah uga faa'idayn kara.
LACAG LA BIXID
Marka aad u baahato inaad lacag la baxdo, dooro dhanka bidix halka ay ku taalloWITHDRAW MONEYee farta cas ku qoran. Halkaa kaddib waxaad arki doontaa sida iyo habka ugu dhow ee aad lacagta kula wareegi kartid. Laakiin shuruuddu waa inay jiraan marka koobaad illaa40 referralsama tixraacayaal adiga kaa heley link oo kaddibna halkaa ka soo galay. Mar kale fadlan referrals-ka ha ka dhex gadan online-ka ee ugu danee Soomaalida adigoo ka duulaya shaqo la'aanta dad badan haysata.
Haddii ay jiraan wax kale oo aad fahmi weydo, ha ka laba-labayn inaad su'aalahaaga isoo weydiisid.
Maxaa sababay qiima dhaca ku yimi lacagta Lira ee dalka Turkiga?,siday se usamaynaysa dhaqaalaha dalkasi: W/Q: Mukhtaar
[War Deg Deg Ah:-] Dekaddii Berbera Oo Qasan Iyo Dp World Oo Dadweynihii Lacagaha Ka Qaaday Alaabadiina U Diiday [Xaala
Bangiga Dhexe Ee Somaliland Oo Lagu Eedeeyay Inuu Lacago Soo Daabacday Iyo Cidda Eedeysay [Muuqaal]
Xildhibaan Indho Indho Oo Eedaymihii Ugu Cuslaa Dusha U Saaray Baanka Dhexe Ee Somaliland Iyo Lacag Fara Badan Oo La Daa
Dawladda Turkiga Ayaa Ku Dhawaaqday Inay Qaadayso Talaabo Adag Oo Lagaga Hor-Tago Qiimo Dhaca Ku Yimi Lacagtii Waddankaa
[Daawo Live:-] Gabadh Weydiisay Sheekh Lacag Badan Oo Rag Fara Badan Ay Facebook Kaga Gurato Shukaansi Inay Xaaran Tahay
[Akhriso:-] Boris Johnson Oo Aan Raali Galin ka Bixinaynin Hadalkii Uu Indho-niqaabka Ka Yidhi, Iyo Twitterkiisa Oo uu Q
Ciidanka Booliska Somaliland Oo Gacanta Ku Dhigay Maandooriye Iyo Lacag Doler Ah Oo Dalka Lagu Isticmaalayay [Arrimo Lag